Legal Education on anti-human trafficking Book - The Fifth Pillar
Resources &Publications Update news
June 4, 2020 July 3, 2020 admin	0 Comments
The Fifth Pillar has publishedabook with the title “Legal Education on Anti-human Trafficking. This publication is intended to use asahandbook in anti-human trafficking awareness training and Public Campaign but not for court reference. The Fifth Pillar is implementing an anti-human trafficking raising awareness program in Yangon region and Eastern Shan State funded by USAID.
At the same time, The Fifth Pillar shall conduct anti-human trafficking awareness raising training, paralegal training, sustainable preparation workshop in this program. Moreover, TFP offers legal consultation on anti-human trafficking and court with zero charges.
The Fifth Pillar isanon-profit, rights and legal based organization to promote Democratic Enlightenment, Rule of Law and Social Empathy. The programs of TFP intend to empower citizens regardless of gender, race, sexual orientation, class and participate in transition of the country.
For compilation of the book, TFP would love to thank the programs director, Mr. Nay Win Naing, senior legal-aid lawyer, Ms. Zinmar Myint, TFP team and fellows who compiled and gathered the necessary information and data. Last but not least, TFP’s gratitude goes to USAID and PRLM for generous funding. TFP wishes all free from human trafficking.
Please, get the book through the link below and for more information, The Fifth Pillar Facebook Page chat box https://www.facebook.com/TheFifthPillar.tfp and call 09428216702, 09965052466 during office hours or email at thefifthpillar.tfp@gmail.com
The Fifth Pillar (ပဉ္စမမဏ္ဍိုင်) အဖွဲ့သည် လူမျိုး၊ ဇာတိ၊ ကိုးကွယ်ရာဘာသာ ၊ ဆင်းရဲ/ချမ်းသာ၊ ဂျဲန်ဒါ မခွဲခြားဘဲ နိုင်ငံသားတိုင်း အသိပညာဗဟုသုတ မြင့်မားတိုးပွားစေရန်နှင့် နိုင်ငံတော်၏ ဒီမိုကရက်တစ် အကူးအပြောင်းဖြစ်စဉ်ကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အထောက်အပံ့ပြုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး Democratic Enlightenment ၊ Promoting Rule of Law ၊ Social Empathy ဆိုသည့် နယ်ပယ်(၃)ခုကို လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်နေသည့် အကျိုးအမြတ်ကို အခြေမခံသော (Rights and Legal Based) အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Promoting Rule of Law Pillar အောက်မှ “လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးနှင့် ဥပဒေအသိပညာ မြှင့်မားလာရေး” စီမံကိန်းတစ်ခုကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့) တို့တွင် USAID နှင့် ပူးပေါင်းပြီး အကောင်ထည်ဖော်ဆောင်နေပါသည်။ ယခု စီမံကိန်းမှ လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေအမြင်ဖွင့် သင်တန်းများ (Anti-Human Trafficking Legal Awareness Training)၊ ဥပဒေအထောက်အကူပြုသင်တန်းများ (Paralegal Training)၊ ဆရာဖြစ်သင်တန်း (Sustainable preparation workshop) များကို စီစဉ်ကျင်းပသွားမည့်အပြင်၊ လူကုန်ကူးမှု တားဆီးကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဥပဒေဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်များပေးခြင်း၊ တရားရုံးများတွင် လိုက်ပါကူညီခြင်းများကိုလည်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ TFP မှ လုပ်ဆောင်သွားမည့် ဖော်ပြပါ သင်တန်းများ၊ ဥပဒေဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ဉာဏ်ပူဇော်ခပေးရန် မလိုအပ်ပါ။
ယခုထုတ်ဝေသည့် “လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေး ဥပဒေရေးရာသိမှတ်ဖွယ်ရာများ” စာအုပ်သည် စီမံကိန်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းမှလုပ်ဆောင်ရန် လျာထားသည့် သင်တန်းများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများနှင့် Public Awareness Campaign များတွင် အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ ဤစာအုပ်တွင် လူကုန်ကူးမှုဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း၊ တရားဥပဒေ၏ အကာအကွယ်များနှင့် တရားရုံးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအဆင့်ဆင့်ကို အများပြည်သူလူထု သိရှိနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး ပြုစုတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပြီး တရားရုံးများတွင် ရည်ညွှန်းစာအုပ်အဖြစ် သုံးစွဲရန်မဟုတ်ပါ။
စာအုပ်အား ပြုစုပေးခဲ့ကြသည့် TFP မှ Program Director ဦးနေဝင်းနိုင်၊ Senior Legal-aid Lawyer ဒေါ်ဇင်မာမြင့်၊ TFP အဖွဲ့သားများနှင့် အချက်အလက်များပံ့ပိုးပေးကြသည့် သက်ဆိုင်သူများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ရှိရပါသည်။ ယခုစာအုပ် ထုတ်ဝေနိုင်ရေး အတွက် ရံပုံငွေထောက်ပံ့ပေးပါသော USAID နှင့် PRLM တို့အားလည်း အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင် အပ်ပါသည်။ လူသားတိုင်း လူကုန်ကူးမှု အန္တရာယ်မှ ကင်းဝေးကြပါစေကြောင်း ဆန္ဒပြုလျက်….
အောက်ပါ Link မှ တဆင့် ရယူနိုင်ပါသည်။
← Emergency Support for Labors (Doe Lote Thar)
List of Supported Labors (Doe Lote Thar program) →
May 18, 2020 July 1, 2020 admin 0